မြန်မာ့စီးပွားရေး ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ခန့်မှန်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း ျပည္တြင္းသတင္း မြန်မာ့စီးပွားရေး ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ခန့်မှန်း
To go with Myanmar-lifestyle-economy-rice, FEATURE by Jerome Taylor and Nan Tin Htwe In this picture taken on January 13, 2015, workers carry sacks of rice for export atawarehouse on the outskirts of Yangon. For much of the early 20th century Myanmar was Asia's rice bowl. But afteranominally socialist junta seized power in 1962, decades of mismanagement shattered the agriculture industry inanation where 70 percent of inhabitants still live in the countryside. The quasi-civilian reformist government, which took over from the military in 2011, is determined to resurrect the country's reputation asarice producer. AFP PHOTO / SOE THAN WIN
မြန်မာ့စီးပွားရေး ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ခန့်မှန်း
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလက စတဲ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လိမ့်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့်ရေး အစီရင်ခံစာ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၉ မှာ အခုလို ခန့်မှန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာနေပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ မနှစ်က စက်တင်ဘာလ အထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။
မှနမြာနိုငငြံမှာ ဘဏျဍာရေး၊ မှယော၊ ကွှနြးကငွမြှု၊ အဆကအြသှယြ ပိုမိုကောငြးမှနမြှုနဲ့ ပုဂျဂလိက ကဏျဍအတှကြ အထောကအြပံ့ပေးမယ့ြ စီးပှားရေး ပတဝြနြးကငွြ ဖနတြီးပေးဖို့တှေ လိုနသေေးတယလြို့လညြး အစီရငခြံစာက ဖောပြှပါတယြ။ မှနမြာနိုငငြံမှာ လကရြှိ ဖှဈပှားနတေဲ့ ပဋိပကျခတှနေဲ့ လကနြကကြိုငတြှကလေညြး စီးပှားရေးအတှကြ စိနခြေါမြှုတှေ အမွားအပှား ဖှဈနတယေလြို့လညြး မီးမောငြးထိုးပှထားပါတယြ။
မွနျမာ့စီးပှားရေး ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုငျနှုနျး တိုးတကျမယျလို့ ကမ်ဘာ့ဘဏျ ခနျ့မှနျး
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့်ရေး အစီရင်ခံစာ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၉ မှာ အခုလို ခန့်မှန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာနေပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ မနှစ်က စက်တင်ဘာလ အထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘဏ္ဍာရေး၊ မြေယာ၊ ကျွန်းကျင်မှု၊ အဆက်အသွယ် ပိုမိုကောင်းမွန်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအတွက် အထောက်အပံ့ပေးမယ့် စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးပေးဖို့တွေ လိုနေသေးတယ်လို့လည်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေကလည်း စီးပွားရေးအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေ အများအပြား ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း မီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။
Previous articleခြံကျူးတွေနဲ့ ဆိုင်ကျူးတွေကို အဓိကထား ရှင်းလင်းမယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ပြော
Next articleဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ သမ္မတ တိုက်တွန်း